Iindaba -Umatshini wase-China osebenza ngomthi uguqula kwaye aphucule imveliso elungileyo
Oomatshini baseTshayina bokwenza izinto baguqula kwaye baphucule imveliso elungileyo
Umzi mveliso wase China osebenza ngomthi uza kungena kwinqanaba lokuvelisa ngobuchule, ukuguqula, kunye nokuphucula ukuya kuphuhliso oluphezulu kunye nesiphelo.
Umatshini osebenza ngomthi sisiseko seshishini lokuvelisa ifanitshala, ishishini lokulungisa iinkuni kunye namanye amashishini. Ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila kwabantu, iimfuno zefanitshala kunye nobomi basekhaya ziya zisonyuka. Umatshini osebenza ngomthi udlala indima ebaluleke ngakumbi kwifenitshala yaseTshayina nakumashishini obomi basekhaya. Ngaphandle koko, oomatshini abasebenza ngokhuni bathatha iQingdao, iYangtze River Delta, kunye neGuangdong njengeyona dolophu iphambili yokuvelisa kunye neyokwenza imveliso ukunika ukudlala ngokupheleleyo kwizibonelelo zokudityaniswa kwemizi-mveliso kunye nokubonelela ngezisombululo zokuvelisa ezizenzekelayo nezixhobo.
Ukunyuka kwefanitshala eyenziwe e-China kuya kukhuthaza ishishini loomatshini ukuba liphucule kwaye lithathe indawo yoomatshini abasebenza ngemithi ngemveliso eguqukayo ehambelana ngakumbi neemfuno zemveliso zefanitshala. Ixabiso lokungena kwimarike yefenitshala elungelelanisiweyo limalunga neepesenti ezingama-20, ekulindeleke ukuba ibe yiminyaka emi-3 ukuya kwemi-5. Iya kukhula ngakumbi ukuya kwi-40%; kwakhona, ukunyamalala okuqhubekayo kwesahlulo sedemokhrasi yase China kukhokelele ekukhuleni kweendleko zabasebenzi, kunye neemfuno zefenitshala ephezulu yokuchaneka kwemveliso kunye nozinzo oluphezulu ziya kukonyusa izinga lokusetyenziswa koomatshini bokusebenza. Ukuphuculwa kokusetyenziswa kuziswe kukunyuka okuqhubekayo kwengeniso elahlwayo yabemi base China nasezilalini. Ukutshintshwa kwezindlu ezininzi ezindala nefenitshala entsha, ukuhonjiswa ngexesha elinye kwezindlu ezisandula ukuthengiswa, kunye nefenitshala enophawu kuzise imfuno emandla yeemarike phezulu. Oku kuyakwandisa ishishini lokuvelisa ifanitshala yase China kwaye ishishini loomatshini abasebenza ngokhuni liya kugcina ukukhula okuthile kwiminyaka emihlanu ezayo.
Isixeko saseQingdao e-China sinesihloko esithi "IsiXeko saseTshayina sokwenza umthi" kwaye sisixeko esimele umzi-mveliso wokhuni e-Mainland China. Ngenxa kuphuhliso olukhawulezayo kushishino ifanitshala eTshayina, abavelisi abangakumbi baye bazimanya kwimarike kunye Qingdao Woodworking Oomatshini e China kule ndawo kunye nabenzi umatshini ngocingo kakhulu kwaye uninzi China. Ixabiso lemveliso lonyaka leQingdao leQingdao li malunga ne-RMB 5 yezigidigidi kwaye ixabiso lonyaka lokuthumela ngaphandle limalunga nezigidi ezingama-200 zeedola zaseMelika. Aphantse ayi-1 000 amalungelo awodwa omenzi wechiza. Iimveliso zigubungela oomatshini beplanga eyenziwe ngomthi, ifanitshala yephaneli, ifanitshala yeplanga eqinileyo, ipeyinti yokutyabeka, oomatshini abasusa uthuli banokubonelela ngezisombululo zemveliso ezenzekelayo kunye nezixhobo zesityalo sonke.
Ukudibanisa uncedo lwezixhobo zikarhulumente, ukukhuthaza amashishini ukuba aguqule kwaye aphucule ngokuzimeleyo, ancedise ekukhuthazeni inguqu kushishino loomatshini bokusebenza, kwaye athathe indlela yezobuntlola kunye neziphelo eziphezulu.